एनएमबी बैंकको प्रचार गर्दै महानायक राजेश हमाल गुल्मीमा ! – ebaglung.com
एनएमबी बैंकको प्रचार गर्दै महानायक राजेश हमाल गुल्मीमा !
२०७५ बैशाख ६, बिहीबार १६:००	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ बैशाख–६ । नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमाल ‘एनएमबी बैंक एक घर एक खाता अभियान’ को प्रचार प्रसारमा गुल्मी आई पुगेका छन् । महानायक हमालले यो बैँक देशको बिश्वासीले बैंक भएको बताएका छन् ।
‘पहिलो पाईला समृद्धिको, आधार सुरक्षित भविष्यको’ भन्ने मुल नाराका साथ सो बैंकको गुल्मी शाखाले आयोजना गरेको एनएमबी बैंक एक घर एक खाता अभियान सदरमुकाम तम्घासको चिदीचौरमा प्रचार प्रसार शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।
शिविरमा राजेश हमालले खाता खोल्नेहरुलाई आफ्नै हातले चेक र एटिएम कार्ड वितरण गरेका थिए । त्यस्तै सरल बैंकिङ खाता खोल्नेलाई १० ग्रामको चाँदीको सिक्का वितरण समेत गरेका थिए । शिविरमा खातावालाहरुको वम्पर उपहार कार्यक्रम अन्तरगत नायक नायक हमाल कै हातले चिठ्ठा थुतेर ५ जनालाई विभिन्न पुरस्कार समेत वितरण गरेका थिए ।
लगत्तै बैंकमा पुगेर उनले भने – ‘सरकारी उद्देश्य अनुरुप हरेक कुन काप्चा सम्म सरल बैकिङ सुविधा प्रदान गर्न आफुहरु देश व्यापी रुपमा एक घर एक खाताको अभियान लिएर हिडेका छौं । ऋण प्रवाहमा सहुलियत ब्याज, वचतकर्तालाई राम्रो ब्याज प्रदान र सवैखाले सुविधा यस बैंकको विशेषता हो ।’
त्यस्तै रिटल बैकिङ प्रमुख सुष्मा शर्माले भिविन्न जिल्ला हुँदै गुल्मीमा राजेश हमाललाई लिएर यस अभियानमा गुल्मी आईएको र अव सन्धीखर्क हुँदै विभिन्न जिल्लामा पुगिने बताईन ।
हालै तम्घास भिमचोक मैं अर्को भवनमा सरेको गुल्मी शाखा प्रमुख भुवन पाण्डेले यस जिल्लामा एनएमबि बैंकमा सेवाग्राहीको आकर्षण बढ्दै गएको बताए । महानायक हमालको फ्यानहरु सेल्फी खिच्नका लागि ठाउँ ठाउँमा भीड गरिरहेका थिए ।
आजको तस्वीर : सबैको आँखा एकै ठाम !
प्रवास : ‘नयाँ वर्ष शुभकामना साँझ’मा सांगीतिक प्रस्तुति दिन चर्चित कलाकार क्षेत्री लण्डन आउने !